သင် စိတ်ဓာတ်ကျပြီး အလုပ်ထဲမှာ စိတ်မပါဖြစ်နေရင် ဘာလုပ်ရမလဲ – Gentleman Magazine
သင် စိတ်ဓာတ်ကျပြီး အလုပ်ထဲမှာ စိတ်မပါဖြစ်နေရင် ဘာလုပ်ရမလဲ
သငျ စိတျဓာတျကပြွီး အလုပျထဲမှာ စိတျမပါဖွဈနရေငျ ဘာလုပျရမလဲ
စိတ်ဓာတ်ကျပြီး အလုပ်ထဲမှာ စိတ်မပါဖြစ်နေတာဟာ ခဏခဏ ဖြစ်တတ်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက် အရမ်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်နေမှန်း စဉ်းစားမရသလို နှင်ထုတ်ရုံနဲ့ ထွက်မသွားပါဘူး။ အဲဒီလို အချိန်မှာဆိုရင် သင် ဘာမှ မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ လှဲပြီး တောင်စဉ်ရေမရ တီဗွီအစီအစဉ်တွေ ကြည့်ရင်ကြည့် အိပ်ရင်အိပ်၊ အဲဒီလို ပျင်းရိပျင်းတွဲကြီးပဲ နေချင်တော့တာပါ။ သွားတိုက်တာ၊ အိပ်ရာပြင်တာလို ပုံမှန် အလုပ်ကလေးကိုတောင် ဧရာမ တာဝန်ကြီးလို ထင်နေရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုမျိုး အခြေအနေက ရုန်းထွက်ချင်ရင် သင် တစ်ခုခုလုပ်ရမှာပါ။ ဘာမှ မလုပ်ရင် သင် ဒီတိုင်းကြီးပဲ ဖြစ်နေမှာပါ။
သင့်ခံစားချက်တွေကို ချရေးပါ။ သင့်ခံစားချက် ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ဦးတည်ပေးပါ။ ” ဘယ်လိုသာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ” ဆိုတာနဲ့စတာတွေ ကို ချရေးပါ။ ဥပမာ သင့်မိန်းမနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီးလို့ စိတ်တွေလေးနေရင် ရန်သာ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတွေ ရေးချပါ။ ဘာကြောင့် ရန်ဖြစ်တာလဲ။ အခု အဲဒါကို ပြင်ဆင်ဖို့ သင် ဘာလုပ်နိူင်သလဲဆိုတာ ချရေးပါ။
သင်ရဲ့ အတွေးတွေကို စာနဲ့ ချရေးတာဟာ စိတ်ကို ပိုရှင်းလင်းစေပြီး သင့်စိတ်ဓာတ်ကျနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို မှန်ကန်တဲ့ ရှုထောင့်ကနေ မြင်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေဟာ စာရွက်ပေါ်မှာဆိုပိုပြီးသေးငယ်သွားသယောင် ခံစားရစေပါတယ်။
သင် စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် တခြားသူတွေကို အပြစ်တင်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ကံကြမ္မာကို ယိုးမယ်ဖွဲ့ရတဲ့ အခေါက်တွေ မနည်းတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင် ကံကြမ္မာမကောင်းရင် မကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ရှိနေလို့ပါပဲ။ ဘုရားရှိခိုး ဆုတောင်းလိုက်ရင် တခြားသူတွေအပေါ် အပြစ်ပုံချတာ နည်းသွားပြီး ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုပဲ ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန် လာတတ်ပါတယ်။
မှတ်တမ်းစာအုပ် တစ်ခုထဲမှာ သင်က လူတွေအပေါ် ဘာကျေးဇူးရှိသလဲ ဆိုတာ တစ်ခုခြင်း ချရေးပါ။ အဲဒါ တစ်ခုခြင်းစီအောက်မှာ အကျယ်ဖြန့် ရှင်းလင်းချက်တွေချရေးပါ။ သင်က ဘာမှ ကျေးဇူး မတင်ထိုက်ဘူးတော့ မပြောပါနဲ့။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူ့ရည်းစား ကားတိုက်မှုနဲ့ ဆုံးသွားပြီးနောက်နေ့မှာတောင်မှ ကျေးဇူးမှတ်တမ်း ရေးနိုင်ပါသေးတယ်။
သင့်ဦးနှောက်က တစ်ချိန်မှာ အလုပ်တစ်ခုပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်က အကောင်းဘက်တွေ စဉ်းစားထားခိုင်းတဲ့အခါ သင့်ကို စိတ်ဓာတ်ကျစေတဲ့ အတွေးတွေ ဝင်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။
၄. အခြားသူတွေအတွက် တစ်ခုခု လုပ်ပေးပါ
တစ်ခုခု အခက်အခဲ ကြုံနေရတဲ့ သူ တစ်ယောက်ယောက်ကို ရှာပြီး ကူညီပေးပါ။ ကြီးကြီးမားမားကြီး ကူစရာ မလိုပါဘူး။ သင့်ကလေးကို အိမ်စာ ကူလုပ်ပေးတာ၊ သင့်မိန်းမကို ပန်းကန် ကူဆေးပေးတာတောင် လုံလောက်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်တူတူ လုပ်ဖို့ပဲ သတိရပါ။ သင့်မိန်းမ အလုပ်သွားတုန်း ပန်းကန်ကူဆေးတာ အရမ်း အကျိုး မထူးပါဘူး။
တခြားသူတွေကို ကူညီတာ အကျိုး နှစ်ခု ရပါတယ်။ ပထမ၊ အလုပ်လုပ်နေရတော့ သင့်မှာ ငိုင်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေဖို့ အချိန် မရှိတော့ပါဘူး။ ဒုတိယ သင့်စိတ်ကို သင့်ပြသနာကနေ သူများ အခက်အခဲဆီ လမ်းကြောင်းလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။
၅. သင့်ထက် ပိုဆိုးတဲ့ လူတွေအကြောင်း စဉ်းစားပေးပါ
သင့်စီးပွားရေးမှာ ငွေကြေး အရှုံးရှိနေရင်တောင် သင့်ခေါင်းပေါ်မှာ အိမ်ခေါင်မိုးနဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ စားစရာတွေ ရှိတုန်းပါ။ မလုံမခြုံ ဘဝမှာ နေရပြီး မနက်ဖြန်အတွက် စားစရာ မသေချာတဲ့သူတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အများကြီးပါ။
သင် ခုကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲထက် ပိုဆိုးတဲ့ အခက်အခဲကို ကြုံရပြီး ပြန်ရုန်းကန်လာနိုင်သူ တစ်ယောက်တော့ အမြဲ ရှိနေမှာပါ။ အာဖရိက၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယတို့မှာ ကုန်းကောက်စရာ မရှိအောင် ဆင်းရဲတဲ့ သင် အခုကြုံနေရတာတွေကို ပြသနာလို့ကို ထင်မှာ မဟုတ်တဲ့ လူပေါင်း သန်းထောင်နဲ့ချီ ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျရာဘဝကို မျှော်လင့်ချက် မပျောက်ပဲ ပျော်ပျော် ဖြတ်သန်းနေသူတွေ သန်းနဲ့ချီ ရှိမှာပါ။ သူတို့တောင် ပျော်နိုင်၊မျှော်လင့်ချက် ထားနိုင်သေးတာ သင်က ဘာလို့ မထားနိုင်ရမှာလဲ။
အပေါ်က အတွေးမျိုးတွေဟာ သင့်စိတ်ကို ထုံထိုင်းနေမှု ပျောက်စေပါတယ်။ သင့်ထက် အခြေအနေ ဆိုးပြီး မျှော်လင့်ချက် မပျောက်တဲ့ သူတွေအကြောင်း စဉ်းစားရတာ သင့် စိုးရိမ်မှုတွေကို ပျောက်စေပါတယ်။
အပေါ်က နည်းလမ်း ငါးရပ်ဟာ အရမ်း လွယ်ကူပါတယ်။ အဲဒါက သူတို့ရဲ့ အားသာချက်ပါပဲ။သင် စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါမှာ သင့်မှာ ခက်ခဲတာတွေလုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ စိတ်ခွန်အား မရှိပါဘူး။ တခြားအားသာချက်ကတော့ နံပါတ် ၄ ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ဟာတွေက ပြင်ပ အကူအညီ မလိုတာပါပဲ။ ယောက်ျားတိုင်း လုပ်လို့ရပါတယ်။
စိတျဓာတျကပြွီး အလုပျထဲမှာ စိတျမပါဖွဈနတောဟာ ခဏခဏ ဖွဈတတျပွီး စိတျအနှောငျ့အယှကျ အရမျး ဖွဈရပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ ဖွဈနမှေနျး စဉျးစားမရသလို နှငျထုတျရုံနဲ့ ထှကျမသှားပါဘူး။ အဲဒီလို အခြိနျမှာဆိုရငျ သငျ ဘာမှ မလုပျခငျြတော့ပါဘူး။ လှဲပွီး တောငျစဉျရမေရ တီဗှီအစီအစဉျတှေ ကွညျ့ရငျကွညျ့ အိပျရငျအိပျ၊ အဲဒီလို ပငျြးရိပငျြးတှဲကွီးပဲ နခေငျြတော့တာပါ။ သှားတိုကျတာ၊ အိပျရာပွငျတာလို ပုံမှနျ အလုပျကလေးကိုတောငျ ဧရာမ တာဝနျကွီးလို ထငျနရေပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အဲဒီလိုမြိုး အခွအေနကေ ရုနျးထှကျခငျြရငျ သငျ တဈခုခုလုပျရမှာပါ။ ဘာမှ မလုပျရငျ သငျ ဒီတိုငျးကွီးပဲ ဖွဈနမှောပါ။
သငျ့ခံစားခကျြတှကေို ခရြေးပါ။ သငျ့ခံစားခကျြ ဖွဈပျေါလာရတဲ့ အရငျးအမွဈတှကေို ဦးတညျပေးပါ။ ” ဘယျလိုသာ ဖွဈခဲ့ရငျ ” ဆိုတာနဲ့စတာတှေ ကို ခရြေးပါ။ ဥပမာ သငျ့မိနျးမနဲ့ ရနျဖွဈပွီးလို့ စိတျတှလေေးနရေငျ ရနျသာ မဖွဈခဲ့ဘူးဆိုရငျ ဘာဖွဈမလဲဆိုတာတှေ ရေးခပြါ။ ဘာကွောငျ့ ရနျဖွဈတာလဲ။ အခု အဲဒါကို ပွငျဆငျဖို့ သငျ ဘာလုပျနိူငျသလဲဆိုတာ ခရြေးပါ။
သငျရဲ့ အတှေးတှကေို စာနဲ့ ခရြေးတာဟာ စိတျကို ပိုရှငျးလငျးစပွေီး သငျ့စိတျဓာတျကနြရေတဲ့ အကွောငျးရငျးကို မှနျကနျတဲ့ ရှုထောငျ့ကနေ မွငျစပေါတယျ။ သငျ့ရဲ့ မကောငျးတဲ့ အတှေးတှဟော စာရှကျပျေါမှာဆိုပိုပွီးသေးငယျသှားသယောငျ ခံစားရစပေါတယျ။
သငျ စိတျဓာတျကနြရေငျ တခွားသူတှကေို အပွဈတငျခငျြပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့မှာ ကံကွမ်မာကို ယိုးမယျဖှဲ့ရတဲ့ အခေါကျတှေ မနညျးတော့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျ ကံကွမ်မာမကောငျးရငျ မကောငျးအောငျလုပျခဲ့တဲ့ အကွောငျး ရှိနလေို့ပါပဲ။ ဘုရားရှိခိုး ဆုတောငျးလိုကျရငျ တခွားသူတှအေပျေါ အပွဈပုံခတြာ နညျးသှားပွီး ကိုယျ့ကံကွမ်မာကိုပဲ ကောငျးအောငျလုပျဖို့ စိတျအားထကျသနျ လာတတျပါတယျ။
မှတျတမျးစာအုပျ တဈခုထဲမှာ သငျက လူတှအေပျေါ ဘာကြေးဇူးရှိသလဲ ဆိုတာ တဈခုခွငျး ခရြေးပါ။ အဲဒါ တဈခုခွငျးစီအောကျမှာ အကယျြဖွနျ့ ရှငျးလငျးခကျြတှခေရြေးပါ။ သငျက ဘာမှ ကြေးဇူး မတငျထိုကျဘူးတော့ မပွောပါနဲ့။ ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျ သူ့ရညျးစား ကားတိုကျမှုနဲ့ ဆုံးသှားပွီးနောကျနမှေ့ာတောငျမှ ကြေးဇူးမှတျတမျး ရေးနိုငျပါသေးတယျ။
သငျ့ဦးနှောကျက တဈခြိနျမှာ အလုပျတဈခုပဲ လုပျနိုငျပါတယျ။ သငျက အကောငျးဘကျတှေ စဉျးစားထားခိုငျးတဲ့အခါ သငျ့ကို စိတျဓာတျကစြတေဲ့ အတှေးတှေ ဝငျမလာနိုငျတော့ပါဘူး။
၄. အခွားသူတှအေတှကျ တဈခုခု လုပျပေးပါ
တဈခုခု အခကျအခဲ ကွုံနရေတဲ့ သူ တဈယောကျယောကျကို ရှာပွီး ကူညီပေးပါ။ ကွီးကွီးမားမားကွီး ကူစရာ မလိုပါဘူး။ သငျ့ကလေးကို အိမျစာ ကူလုပျပေးတာ၊ သငျ့မိနျးမကို ပနျးကနျ ကူဆေးပေးတာတောငျ လုံလောကျပါတယျ။ နှဈယောကျတူတူ လုပျဖို့ပဲ သတိရပါ။ သငျ့မိနျးမ အလုပျသှားတုနျး ပနျးကနျကူဆေးတာ အရမျး အကြိုး မထူးပါဘူး။
တခွားသူတှကေို ကူညီတာ အကြိုး နှဈခု ရပါတယျ။ ပထမ၊ အလုပျလုပျနရေတော့ သငျ့မှာ ငိုငျပွီး စိတျဓာတျကနြဖေို့ အခြိနျ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒုတိယ သငျ့စိတျကို သငျ့ပွသနာကနေ သူမြား အခကျအခဲဆီ လမျးကွောငျးလှဲပေးလိုကျပါတယျ။
၅. သငျ့ထကျ ပိုဆိုးတဲ့ လူတှအေကွောငျး စဉျးစားပေးပါ
သငျ့စီးပှားရေးမှာ ငှကွေေး အရှုံးရှိနရေငျတောငျ သငျ့ခေါငျးပျေါမှာ အိမျခေါငျမိုးနဲ့ ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ စားစရာတှေ ရှိတုနျးပါ။ မလုံမခွုံ ဘဝမှာ နရေပွီး မနကျဖွနျအတှကျ စားစရာ မသခြောတဲ့သူတှေ ကမ်ဘာပျေါမှာ အမြားကွီးပါ။
သငျ ခုကွုံနရေတဲ့ အခကျအခဲထကျ ပိုဆိုးတဲ့ အခကျအခဲကို ကွုံရပွီး ပွနျရုနျးကနျလာနိုငျသူ တဈယောကျတော့ အမွဲ ရှိနမှောပါ။ အာဖရိက၊ တရုတျ၊ အိန်ဒိယတို့မှာ ကုနျးကောကျစရာ မရှိအောငျ ဆငျးရဲတဲ့ သငျ အခုကွုံနရေတာတှကေို ပွသနာလို့ကို ထငျမှာ မဟုတျတဲ့ လူပေါငျး သနျးထောငျနဲ့ခြီ ရှိပါတယျ။ အဲဒီထဲမှာ ကရြာဘဝကို မြှျောလငျ့ခကျြ မပြောကျပဲ ပြျောပြျော ဖွတျသနျးနသေူတှေ သနျးနဲ့ခြီ ရှိမှာပါ။ သူတို့တောငျ ပြျောနိုငျ၊မြှျောလငျ့ခကျြ ထားနိုငျသေးတာ သငျက ဘာလို့ မထားနိုငျရမှာလဲ။
အပျေါက အတှေးမြိုးတှဟော သငျ့စိတျကို ထုံထိုငျးနမှေု ပြောကျစပေါတယျ။ သငျ့ထကျ အခွအေနေ ဆိုးပွီး မြှျောလငျ့ခကျြ မပြောကျတဲ့ သူတှအေကွောငျး စဉျးစားရတာ သငျ့ စိုးရိမျမှုတှကေို ပြောကျစပေါတယျ။
အပျေါက နညျးလမျး ငါးရပျဟာ အရမျး လှယျကူပါတယျ။ အဲဒါက သူတို့ရဲ့ အားသာခကျြပါပဲ။သငျ စိတျဓာတျကတြဲ့အခါမှာ သငျ့မှာ ခကျခဲတာတှလေုပျဖို့ လုံလောကျတဲ့ စိတျခှနျအား မရှိပါဘူး။ တခွားအားသာခကျြကတော့ နံပါတျ ၄ ကလှဲရငျ ကနျြတဲ့ဟာတှကေ ပွငျပ အကူအညီ မလိုတာပါပဲ။ ယောကျြားတိုငျး လုပျလို့ရပါတယျ။
Previous: အမျိုးသမီးတစ်ယောက် မှီခိုအားထားရာ ဖြစ်ဖို့
Next: အမျိုးသားတို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံး စားသောက်ဖွယ်ရာများ